अटो टेक Archives - Page 14 of 14 - Technology Khabar
» अटो टेक » Page 14
काठमाडौँ । अमेरिकन अटो कम्पनी फोर्डले इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्टअप स्पीन किन्ने भएको छ । हालै आएको एक रिपोर्टअनुसार फोर्डले करिब १०० मिलियन अमेरिकी डलरमा सो स्टार्टअपलाई किन्न लागेको बताईएको छ […]
प्रदेश नं. ३ मा विद्युतीय सार्वजनिक बस संचालन गरिने, ३० करोड लगानीमा १५ वटा बस सञ्चालन हुने
काठमाडौं । प्रदेश नं. ३ सरकारले आउँदो वैशाखसम्म १५ वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। प्रदेश तीनका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित […]
काठमाडौं । बजाज मोटरसाइकलको लागि आधिकारीक बिक्रेता एचएच बजाजले अल न्यू बजाज पल्सर एनएस १६० ट्वीन डिस्कलाई नेपाली बजारमा बिक्री वितरण सुरु गरेको छ। यसमा २ वटा डिस्क ब्रेक, सार्प […]
काठमाडौं । हुन्डाईले आफ्नो आइकोनिक हुन्डाई सेन्ट्रोको नयाँ जेनेरेशन भारतमा सार्वजनिक गरेको छ । भारतमा हुन्डाई ब्रान्डले २० वर्ष पुरा गरेको अवसरमा सो कारलाई पुनः बजारमा लन्च गरेको हो । […]
काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाली कार निर्माता कम्पनी हुण्डाईले एउटा क्रसओभर स्पोर्टस यूटिलिटी भेहिकल बिकसित गरिरहेको छ, जसको नाम कोना राखिएको छ र यो इलेक्ट्रिक भेहिकल छिटै सडकमा देखिने भएको छ […]
काठमाडौं । नेपालको लागि हुन्डाइ गाडीको एक मात्र अधिकृत बिक्रेता लक्ष्मि इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले हुन्डाइ हाईवे एसुरेन्स सेवा ल्याएको छ । कम्पनीले हुन्डाइ गाडिहरुको लागि फ्रि चेकअप क्याम्प आयोजना गरेको छ […]
ओकिनावा अटो–टेकद्धारा रेज्ड इलेक्ट्रीक स्कूटर सार्वजनिक
काठमाडौं । इलेक्ट्रीक टु–ह्वीलर निर्माता ओकिनावा अटो–टेकले रेज्ड इलेक्ट्रीक स्कूटर भारतीय बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । यो स्कूटरमा ८ सयवाटको बीएलडीटी वाटरप्रुफ मोटर दिइएको छ । यो स्कूटरमा लिथियम आयान […]
काठमाडौं । यूएम बाइकको आधिकारीक बिक्रेता आइएमई अटोमोटिभ्स् प्रालिले नेपाली बजारमा ल्याएको यूएम मोटरसाइकलको एपीअटो ईन्टरप्राईजेजलाई आधिकारिक डिलरमा नियुक्त गरेको छ । यूएम मोटरसाइकलले काठमाडौंको सामाखुशीमा आफ्नो शाखा विस्तार गर्दै […]
काठमाडौं । पर्यटकिय नगरी पोखरामा यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएको तहल्का ट्राभल्स् एण्ड टुर्सद्धारा सञ्चालित तहल्का बसको टिकट अबदेखि अनलाइनबाट काट्न सकिने भएको छ । विगत लामो समयदेखि सञ्चालित पर्यटकिय […]
काठमाडौं । बेलायती एसयुभी निर्माता कम्पनी ज्यागुअर(Jaguar)ले पेरिस अटो शोमा आफ्नो पहिलो इलेक्ट्रीक एसयुभी ‘आई-पेस’ (I-Pace) प्रदर्शन गरेको छ । कम्पनीले यसअघि पनि विभिन्न मोटर शोमा आइ-पेसलाई देखाउँदै आइरहेको छ […]
काठमाडौं । किया मोटर्सले अल न्यू इलेक्ट्रिक ई–नेरो पेरिस मोटर शो २०१८ मा प्रदर्शन गरेको छ । क्रसओभर एसयूभी गाडि युरोपेली बजारमा अर्को वर्षको मार्चबाट बिक्री शुरु हुनेछ । यसको […]
काठमाडौं । बेलायती अटो कम्पनी रोयल एनफील्डले बुधवार दुई नयाँ मोटरसाइकलको मोडलको विश्व बजारमा घोषणा गरेको छ । कम्पनीले कन्टिनेन्टल जीटी ६५० र इन्टरसेप्टर र्आइएनटी ६५० विश्व बजारमा ल्याउने भएको […]
काठमाडौं। विश्वभर चलिरहेको विद्युतीय सवारीसाधन कुदाउने होडमा मध्यपूर्वको देश कतार पनि सहभागी भएको छ । कतारले सन् २०२३ भित्र पहिलो विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ । विद्युतीय सवारीसाधन […]
काठमाडौं । टीभीएस टू ह्वीलको लागि नेपालको आधिकारीक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले स्मार्ट कनेक्टेड स्कुटर एनटर्क १२५ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले भृकुटीमण्डपमा आयोजित नाडा अटो शो २०१८ मा […]
काठमाडौं । यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको नेपालको लागि आधिकारिक विक्रेता एम ए डब्लु इन्टरप्राइजेजले जेडआर ‘स्ट्रिट र्‍याली’ स्कुटर सार्वजनिक गरेको छ। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमको बीच ‘एम ए डब्लु’ टु […]
काठमाडौं । फक्सवागनको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता पूजा इन्टरनेशनल नेपाल प्रा.लि.ले फक्सवागनको नयाँ मोडलको गाडी पोलो १.० नेपाली बजारमा भित्राएको छ । कम्पनीले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनकोे आयोजना गरी नयाँ गाडी […]
१३ औं नाडा अटो सो भदौ २६ गतेदेखि आयोजना हुने
काठमाडौं । नाडा अटो मोबाईल्स एशोसिएशन अफ नेपालले १३ औं नाडा अटो सो भदौ २६ गतेदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गर्ने भएको छ। यस क्षेत्रमा भएको नाडाका कार्यबाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले […]
काठमाडौं । कार भाडामा दिने स्टार्टअप कम्पनी रेभमा (Revv) कोरियन कार निर्माता हुण्डाईले लगानी गरेको छ । कम्पनीले भारतमा अन डिमाण्ड सेवा दिने कम्पनी रेभमा १४.३ मिलियन लगानी गरेको हो […]
काठमाडौं । बजाज मोटरसाइकलको लागि आधिकारीक बिक्रेता एचएच बजाजले अल न्यू बजाज पल्सर १५० ट्वीन डिस्क नेपाली बजारमा बिक्री वितरण सुरु गरेको छ । यसमा २ वटा डिस्क ब्रेक, सार्प […]
टाटा हिटाची ज्याक्सीस १४० एच नेपाली बजारमा
काठमाडौं । नेपालका लागी टाटा हिटाचीको अधिकृत बिक्रेता सिप्रदी अर्थमुभर्सले बिराटनगरमा आफ्नो नयाँ प्रोडक्ट टाटा ज्याक्सीस १४० एच लन्च गरेको छ । सो कार्यक्रममा आफ्ना ग्राहकहरुलाई बिभिन्न किसिमका उपहारको पनि […]
काठमाडौं । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले आइतबार स्टाइलिस स्कुटर फेसिनो नयाँ आकर्षक कलरमा सार्वजनिक गरेको छ । अब ‘सुपरमोडेल स्कुटर’ ‘ग्ल्यामरस गोल्ड’ कलरमा समेत […]
काठमाडौं । एड्भान्स अटोमोवाइल प्रालि –बिशाल ग्रुप अन्र्तगतको कम्पनीले रेनोको बहुप्रतिक्षित एसयुभी क्याप्चरको नेपाल अधिराज्य भरि प्रि बुकिङ्ग खुल्ला गरेको छ । नेपाली बजारमा आउन लागेको रेनो क्याप्चर नयाँ प्रिमियम […]